‘पहिले चुनाव सफल पारौँ, पछि सङ्घर्ष गरौँला’ – Akhabar Dainik
‘पहिले चुनाव सफल पारौँ, पछि सङ्घर्ष गरौँला’
बिहिबार, असार ८, २०७४
मधेश आन्दोलनबाट स्थापित सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पछिल्लो समय आदिवासी, जनजाति र खसलाई मिलाएर राष्ट्रिय राजनीतिमा जुट्नुभएको छ । उहाँले स्थानीय तहको चुनावमा भाग लिएर सबैलाई अच्चमित पनि बनाउनुभयो । हाल दोस्रो चरणको चुनाव सफल बनाउने तयारीमा रहनुभएका उपेन्द्र यादवसँग गरिएको कुराकानी ।
स्थानीय तहको चुनावको तयारी चलिरहँदा तपाईंको पार्टी अलि बढी नै चर्चा सुनिन्छ किन त्यस्तो छ ?
– चर्चा सुनिनु स्वाभाविक हो । हाम्रो पार्टी परिवर्तनकारी शक्ति हो र परिवर्तनका लागि सङ्घर्ष जारी राखिरहेकै अवस्थामा चुनावमा सहभागि भएको हो, त्यही भएर अलि बढी नै चर्चा भएको हो । माओवादी जनयुद्धबाट पहिलो पटक चुनावमा भाग लिँदा जस्तो चर्चा भएको थियो, त्यस्तै चर्चा अहिले फोरम नेपालको छ । फोरम नेपाल पनि विगत १० वर्षभन्दा बढी समयदेखि लगातार आन्दोलन गर्दै आइरहेको छ र आन्दोलन चलिरहेकै अवस्थामा हामीले चुनावमा भाग लिऔँ, त्यसले सबैको ध्यान हाम्रो पार्टीप्रति आकर्षण भएको छ ।
यो चर्चा बढी नकारात्मक रूपमा भइरहेको छ किन ?
– हो, केही व्यक्तिले हाम्रो पार्टीको बारेमा गलत प्रचार र भ्रमपूर्ण अभिव्यक्ति दिएर बदनाम गराउने प्रयास गरिरहेका छन् तर त्यसले हाम्रो पार्टीलाई खासै केही असर गर्दैन । गैरराजनीतिक संस्कार र सोच बोकेका पार्टीका नेताले त्यस्तो दुष्प्रयास गरिरहनुभएको छ । जसको आन्दोलनमा कुनै योगदान नै छैन । जसले मधेश मुक्तिको आन्दोलन दबाउनका लागि भूमिका खेले, त्यस्ता व्यक्तिले अहिले फोरम नेपालको आलोचना गरिरहनुभएको छ । ज–जसले हाम्रो पार्टीको आलोचना गरिरहनुभएको छ, त्यसको राजनीतिक पृष्ठभूमिको अध्ययन गर्नुस् आफैँ बुझ्नुहुन्छ कि उहाँहरूले किन आलोचना गरिरहनुभएको छ । मधेश आन्दोलन भइरहँदा ती नेताको कुनै अतोपतो थिएन । मैले नै उहाँहरूलाई जबर्जस्ती आन्दोलनमा तानेर ल्याएको हुँ । अहिले पनि उहाँ (राजपा) हरू आन्दोलनको घोषणा गर्नुहुन्छ, फिर्ता लिनुहुन्छ, फेरि घोषणा गर्नुहुन्छ । किन सफल बनाउन सकिरहनुभएको छैन । राजपा नेपाल गठन भएको तीन महिना भइसक्यो तर उहाँहरूले पटक–पटक आन्दोलन घोषणा गरेर फिर्ता लिँदै गर्नुभएको छ । त्यस्तो किन गर्नुहुन्छ, हिम्मत भए आन्दोलन गरेर देखाओस् न ।
तपाईंमाथि पनि आरोप छ, संविधान संशोधन नै नगराइकन चुनावमा भाग लिएको भन्ने, संविधान पुनःलेखनको कुरा उठाउने संविधान संशोधन नहुँदै चुनावमा भाग लिएर मधेश आन्दोलनलाई बीचमै छाडेको भन्ने यसमा तपाईं के भन्नुहुन्छ ?
– मैले बुझ्न नसकेको एउटा कुरा हाम्रो पार्टी चुनावमा भाग लिँदा केही दललाई किन टाउको दुखाइको विषय बनेको छ ? अहिले उहाँहरूको आन्दोलन राज्य केन्द्रित होइन, फोरम नेपालविरुद्ध भइरहेको छ त्यस्तो किन ? अहिलेसम्म उहाँहरूले यति पनि बुझ्न सक्नुभएको छैन कि आन्दोलन केका लागि गर्ने, कसको विरुद्ध गर्ने र किन गर्ने । राज्यसँग लड्नुपर्ने राजपा नेपाल अहिले फोरम नेपालविरुद्ध आन्दोलन शुरु गरेको छ । जो उहाँहरूको लागि यो ठूलो भूल हो । राजनीतिकमा हरेकको आ–आफ्नो विचार, दृष्टिकोण, एजेन्डा हुन्छ र त्यसैको आधारमा ऊ अगाडि बढिरहेको हुन्छ र हामीले पनि त्यही ग¥यौँ । हामीले कुनै आन्दोलन तथा मागलाई छाडेका छैनौँ । संविधान संशोधन हुनुपर्छ भन्ने अहिले पनि हामीहरूको माग हो, मधेशी, आदिवासी, जनजाति, मुस्लिम, महिला, पिछडा वर्गको अधिकार संविधानमा उल्लेख गर्नुपर्छ भनेर अहिले पनि हामी कडा रूपमा उठाएका छाँै तर स्थानीय चुनाव पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको एक उपलब्धि हो र त्यो उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नु के हाम्रो गल्ती हो ? लोकतन्त्रको सबैभन्दा महŒवपूर्ण पक्ष भनेको चुनाव नै हो । संसदीय राजनीतिक गर्ने दलले चुनावलाई बहिष्कार ग¥यो भने त्यो राजनीतिक संस्कार हुनै सक्दैन । प्राप्त उपलब्धिलाई रक्षा गर्दै बाँकीका लागि सङ्घर्ष गर्ने हामीले नीति लिएका छौँ । २० वर्षसम्म हुन नसकेको स्थानीय चुनाव गणतन्त्र आएपछि हुन लागेको हो, के यो उपलब्धि होइन, यसलाई संस्थागत गर्नु गलत हो त ? सङ्घर्ष, आन्दोलन, क्रान्ति नियमित चल्ने प्रक्रिया हो तर चुनाव भन्ने कुरा निश्चित समयमा आउँछ । त्यसलाई सदुपयोग गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ र अर्को कुरा हाम्रो पार्टीको साङ्गठनिक संरचना देशैभरि रहेको छ । त्यहीअनुसार हामीले नीति बनाउनुपर्छ । त्यसैको आधारमा पार्टी्भित्र योजना सेटिङ गर्नुपर्छ । राजपा नेपाल त आठ जिल्लामा मात्र सीमित छ । आठ जिल्लामा पनि प्रत्येक जिल्लामा भने जस्तो सङ्गठन छैन, अनि त्यो दलले त्यहाँको कुरालाई फोकस नगर्ने हो भने कहाँको गर्ने हो । अहिले पनि दुई नम्बर प्रदेशमा गएर टाउको गिनेर नै सङ्गठनको हिसाब गर्ने हो, राजपा नेपालभन्दा फोरम नेपाललाई ठूलो पार्टीको रूपमा पाउनुहुन्छ । त्यसैले उहाँहरूले हाम्रो विरोध गर्नुको कुनै तुक छैन । हाम्रो सङ्गठन र पार्टीप्रति त्यति घमण्ड छ भने मैदानमा आएर आजमाइस गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको चुनावमा आफू भाग लिने स्थानीय तहको चुनावमा जनताले भाग लिन खोज्दा खबरदार भन्नेप्रति मलाई दाया जागेर आउँछ ।
वैशाख ३१ गते एकै चरणमा देशैभरिको चुनाव सम्पन्न गराउने सरकारको निर्णय थियो तर पटक–पटक चुनाव सार्दै अहिले दुई नम्बर प्रदेशमा हुने स्थानीय तहको चुनावलाई असोज २ गतेलाई पु¥याइएको छ, यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
– यो एकदमै गलत भएको छ । यसले देशलाई दीर्घकालीन असर गर्ने छ । वैशाख ३१ गते हुने चुनावलाई जेठ ३१ गतेलाई सारियो त्यो एक हदसम्म ठिक थियो किनभने राजपा नेपाल पनि चुनावमा आउने कुरा थियो, त्यही भएर सारिएको थियो । फेरि असार ९ गते सारियो त्यो गलत थियो । मुसलमानको रमजान परेको कारण चुनावलाई असार १४ गतेका लागि सारेको हो । असार १४ गते नै दोस्रो चरणको सबै चुनाव गराउनुपथ्र्यो । त्यसबाट मधेशका आठ जिल्ला जो दुई नम्बर प्रदेशमा पर्छ, त्यसको चुनाव छुट्टै हुने निर्णय भयो । यो महाभूल हो । एक त राज्यले आठ वटा जिल्लामा मात्र मधेशलाई सीमित गर्ने षड्यन्त्र ग¥यो । द्वन्द्वको बीउ रोप्ने काम राज्यबाट भएको छ । अर्को कुरा देशलाई विखण्डन चाहने तŒवको पनि मनोबल बढाउने कार्य राज्यबाट भएको छ र यी सबै राजपा नेपालको सल्लाहमा भएको हो । यदि सल्लाह भएर भएको छैन भने त्यसको विरुद्धमा किन अवाज उठाएन । कुनै–कुनै नेताले कपिलवस्तु, नवलपरासी र रूपन्देही गरी ११ वटा जिल्लाको चुनाव सार्न भनेको मानेनन् भनि अभिव्यक्ति दिइरहनुभएको छ, कसैले पाँच नम्बर प्रदेशको समेत चुनाव सार्न भनेको भन्नुहुन्छ । यसबाट पुष्टि हुन्छ कि उहाँहरूले चुनाव सार्न भन्नुभएकै हो तर म ती नेताहरूलाई सोध्न चाहन्छु कि के ११ जिल्ला मात्र मधेश हो त ? के दुई नम्बर प्रदेश र पाँच नम्बर प्रदेश मात्र मधेश हो त ? कैलाली कञ्चनपुर, बर्दिया के हो त ? झापा, मोरङ र सुनसरी के हो त ? राजपा नेपालले मधेशलाई आठ वटा जिल्लामा मात्र किन सीमित ग¥यो, त्यो त मलाई थाहा छैन तर फोरम नेपाललाई त्यो कदापि स्वीकार हुँदैन । फोरम नेपाल पूर्वदेखि पश्चिमसम्म मधेशमा दुई वटा प्रदेशको आवधारणा लिएर अगाडि बढेको छ, त्यसबाट दायाँबायाँ हुँदैन ।
तपाईंको पार्टीले पहिलो चरणको चुनावमा भाग लियो, अहिले दोस्रो चरणको चुनावको तयारीमा हुनुहुन्छ, पहिलो चरणको चुनावमा त अपेक्षित सफलता हात लागेन नि ?
– कुनै पनि मान्छेको अपेक्षा पूरा हुन सक्दैन । अपेक्षा त अनेक हुन्छ । यद्यपि तपाईंले भनेको जस्तो केही हात लागेन भन्ने गलत हो । हाम्रा पार्टीका उम्मेदवार पनि वडामा जितेका छन् । कुनै–कुनै ठाउँमा जित्दाजित्दै हारेका छन् । जे जस्तो मत आएको छ, त्यसमा हामी सन्तुष्ट छौँ । फाउन्डेशन तयार भएको छ । सङ्गठन निर्माण भएको छ । कार्यकर्ता पहिचान भएको छ । पार्टीको पकड कहाँ–कहाँ कुन–कुन क्षेत्र र जिल्लामा के कस्तो छ, त्यसको एउटा आँकडा तयार भएको छ । अगामी दिनमा हामी त्यसैलाई टेकेर सङ्गठनको काम गर्छौं । आउने दिनमा योभन्दा राम्रो आउँछन् भने विश्वास छ । रह्यो कुरा दोस्रो चरणको चुनावमा । अपेक्षाकृत पहिलो चरणको चुनाव भएको क्षेत्रभन्दा दोस्रो चरणमा हुन लागेको क्षेत्रमा फोरम नेपालको राम्रो सङ्गठन छ । पछिल्लो समय फोरम नेपालप्रतिको आकर्षण र जनलहर देख्दा चुनावको परिणाम पनि राम्रै आउला भन्ने विश्वास लिएको छु ।
असार १४ गतेको चुनावको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ, दोस्रो चरणको चुनाव हुन लागेको क्षेत्रमा चुनौती पनि छन्, राजपा नेपाल, सिके राउत, सशस्त्र समूह, लिम्बूवान लगायतका चुनौती छन्, चुनाव कस्तो होला जस्तो लाग्छ तपाईंलाई ?
– पहिलो चरणको जस्तै यो चुनाव पनि शान्तिपूर्ण नै हुने कुरामा विश्वास लिएको छु । यद्यपि दोस्रो चरणको चुनावमा केही चुनौती पक्कै पनि छन् तर राज्यले यसको व्यवस्थापन गर्ने छ । हामी अहिले पनि भन्छौँ राजपा नेपाललगायत सङ्गठनलाई कि आउनुस् मिलेर चुनाव सफल पारौँ । चुनाव सकिनेबित्तिकै बाँकी कुराका लागि सङ्घर्ष गरौँला । मैले यहाँ तपाईंको सामु यस्तो भनेको होइन । राजपा नेपालका नेतालाई मैले भेटेर नै चुनावमा आउन आग्रह गरेको छु । शुरुमा उहाँहरू पनि चुनावमा आउन चाहनुभयो तर पछि किन आउनुभएन थाहा छैन । मसँग कुरा गर्दा उहाँहरूले न पार्टी छ, न चुनावचिह्न छ कसरी चुनावमा भाग लिने भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो तर राज्यले उहाँहरूका लागि स्थानीय तह निर्वाचन ऐन पनि संशोधन ग¥यो । पार्टी दर्ता गराउने प्रावधान ल्यायो । चुनावमा जाने तयार भएको भए चुनावचिह्नको पनि व्यवस्था राज्यले गथ्र्यो तर उहाँहरू पटक–पटक चुनावको मिति सार्नका लागि दबाब दिनुभयो तर पार्टी दर्ता र चुनावचिह्न लिने विषयमा कहिल्यै पहल गर्नुभएन ।
अघि तपाईं भन्नुभयो कि सरकारले दुई नम्बर प्रदेशको चुनाव सारेर गल्ती गरेको छ, सरकार बनाउन त तपाईंको पनि सहयोग छ तपाईंबाट गल्ती भएको छ कि छैन ?
– हामीले सरकारलाई यो सबै गर्नका लागि सहयोग गरेका होइनाँै । संविधान संशोधन र चुनाव गराउनका लागि सहयोग गरेका हौँ । सरकारलाई सहयोग गर्दैमा उसले जे–जे गर्छ, त्यसको साक्षी हामी बस्न सक्दैनौँ । सरकारलाई हामीले समर्थन गरेका छौँ तर कुनै निर्णय हुँदा हामीलाई जानकारी आउँदैन । यो चुनावका मिति सार्नुदेखि लिएर विभिन्न निर्णय सरकारले गरेका छन् तर हामीसँग कुनै विषयमा सोधेको छैन । हामीसँग सल्लाह गरेर चुनावको मिति सार्ने कुरा भएको भए हामीले यस्तो हुने दिने थिएनौँ । यद्यपि यी विषयमा हामीले अहिले विवाद गर्न चाहेका छैनौँ । हाम्रो लक्ष्य भनेको भयरहित वतावरणमा चुनाव सम्पन्न गराउनु हो । कुनै विवाद झिकेर हामी चुनावलाई प्रभावित गर्न चाहेका छैनौँ ।
यसपालिको चुनावमा दलहरूको बीचमा अनौठो खालको तालमेल देखिएको छ, जुन यसअघिका चुनावमा भएका थिएनन्, यस्तो अवस्था किन आयो ?
– तालमेल हुनु राम्रो कुरा हो । जसको जहाँ पकड छ त्यहाँ उसैले जित्नुपर्छ यो राम्रो कुरा हो । यसलाई अनौठो मान्नु हुँदैन तर यो तालमेल हुनुको कारण दलहरूको सङ्ख्या धेरै भएर हो । पहिला–पहिलाको चुनावमा दलहरू धेरै नहुँदा प्रतिस्पर्धा कडा हुँदैन्थ्यो र तालमेलको आवश्यकता पर्दैन्थ्यो तर अहिले दलहरूको धरै छन् प्रतिस्पर्धा कडा छन्, त्यसैले आ–आफ्नो उम्मेदवार जिताउनका लागि यस्तो तालमेल भएको हो ।
विपरीत विचारका दलहरूसँग पनि तालमेल भएको छ जस्तै एमाले–राप्रपा, काँग्रेस–माओवादी, फोरम–एमाले जस्ता तालमेल भएका छन्, यो कसरी सम्भव भयो ?
– यो स्थानीय तहको चुनाव हो र स्थानीय स्तरमा पार्टीभन्दा पनि व्यक्ति विशेषको बढी चर्चा हुन्छ । आफ्नो गाउँ ठाउँमा जोसँग कुरा मिल्यो उसैसँग तालमेल गर्छन् । यो स्थानीय स्तरको विशेषता हो । यसलाई अनौठो रूपमा लिनु हुँदैन तर अहिले जुन किसिमको तालमेल देखिरहनुभएको छ, त्यस्तो तालमेल आउने केन्द्रीय तथा सङ्घीय प्रदेशको चुनावमा पाउनुहुन्न । तालमेल हुनु स्वाभाविक प्रक्रिया हो । यो लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो । दलहरू एकआपसमा तालमेल गरेर चुनावमा गयो भने कुनै किसिमको द्वन्द्व हुने सम्भावना रहँदैन । (गोरखापत्रबाट)